Gbasara Anyị - Linyi Juda Science and Technology Environmental Protection Engineering Co., Ltd.
Linyi Juda sayensị na teknụzụ nchedo gburugburu ebe obibi co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ihe karịrị afọ 30 'akụkọ ihe mere eme, nke kachasị etinye aka na nchekwa gburugburu ebe obibi ọkụ ọkụ, ọkụ na-akwado akụrụngwa, nchekwa gburugburu ebe obibi na-ewepụ ájá na usoro nchịkwa akpaaka, wdg.
Companylọ ọrụ anyị emeriwo ntụkwasị obi nke ọtụtụ ndị ahịa site na usoro nhazi zuru oke, ngwaahịa ndị magburu onwe ha, ike siri ike na ikike nrụpụta, njikwa injinia a pụrụ ịdabere na ya, ọrụ dị elu na arụmọrụ dị mma. Tụkwasị na nke a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike dị ike, nke nwere otu ndị gụrụ akwụkwọ nke ọma maka imepụta na ikpo ọkụ, ntinye ihe eji arụ ọrụ, nchịkọta usoro nchịkwa akpaaka na akụkụ ndị ọzọ nke ihe omimi dị omimi nke ndị ọrụ nchịkwa na ndị ọrụ aka.
Anyị na-enye a nso nke ọrụ site na mkpokọta atụmatụ imewe, oru ngo ewu, n'ibu akụrụngwa imewe na n'ichepụta, ka zuru set nke akpaka chemical akara usoro nhazi, na-na saịtị echichi na Jizọs na-ezipụ, oru pesonel ọzụzụ, yana akụrụngwa mmezi.
Dabere na-emepe emepe anyị uru na wayo mmepụta akara, anyị ifịk ifịk eweta ọhụrụ elu technology na mepụtara ọhụrụ wayo n'ekwú ọkụ ekwekọghị dị ka ndị kilns na gas dị ka mmanụ ụgbọala. Site na mmepe ụwa, ọtụtụ steeti na-abawanye itinye ego na akụrụngwa. N'ọnọdụ ndị dị otú a, anyị na-eji ezigbo ohere zuru oke. Anyị na-akwụkwu ntị ngwa ngwa wayo mmepụta teknụzụ mmelite, ma gbalịa ike anyị niile ka anyị nwee nnukwu ọganiihu na mgbanwe teknụzụ, ihe ọhụrụ, ma meziwanye usoro nrụpụta ọrụ; na anyị niile dị njikere àjà ahịa si n'ụwa nile magburu onwe ngwá na nkà na ụzụ na ụda ọrụ. Ebe ọ bụ na oruru, anyị kwenyere na àgwà bụ ndụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị ahịa bụ Chineke. Anyị na-esi ọnwụ na ị na-enye ndị ahịa anyị ezigbo mma, ọnụahịa dị oke ọnụ na ọrụ ụda. Na anyị n'ichepụta usoro na-ẹkenam karịa 10 mba. Anyị ga-esi ọnwụ na n'ichepụta magburu onwe ngwaahịa, àjà zuru okè mgbe-ire ọrụ niile ahịa dị na mbụ.
Obi ụtọ na-anabata ndị ahịa ma n'ụlọ na mba ọzọ ileta ụlọ ọrụ anyị!
Calcium oxide na Calcium hydroxide, Aha Azụmaahịa nke Calcium Oxide, Calcium hydroxide Production Line akụrụngwa, Calcium hydroxide akụrụngwa, Ime Calcium hydroxide, Calcium Hydroxide Ime,